पूर्वराजालाई चुनौतीः गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रले नै ल्याएको हो, हामीले ल्याएकै होइन : प्रधानमन्त्री देउवा - एनसञ्चार अनलाइन || Nsanchar Online
पूर्वराजालाई चुनौतीः गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रले नै ल्याएको हो, हामीले ल्याएकै होइन : प्रधानमन्त्री देउवा
समाचार सन्दर्भ ।। एन सञ्चार ।।
गणतन्त्रको कुरो गर्दा म जेल परेको हुँ भन्छन् पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओली, ठ्याक्कै त्यही कुरो गर्छन् प्रधानमन्त्री देउवा । सत्र हजार नेपालीको रगतको खोलो बगाएर गणतन्त्र ल्याएको कुरो गर्छन् प्रचण्ड अनि बाबुराम । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र छुस्स बोल्न नपाउँदै सत्तानै उलटपुलट भएजसरी बक्तब्यबाजी निकाल्न आतुर हुन्छन् यी शिर्ष नेताहरु । यता रविन्द्र मिश्रले ठूलै चूनौतीका बाबजुद पार्टी मै हलचल हुनेगरी आफ्नो प्रतिवेदन बहुमतले पास गराए जसमा नेपालमा गणतन्त्र सफल भएन, आवश्यक रहेन । बरु केन्द्र र स्थानिय तहको संरचनामा जाऔं । राज्यको अनाबश्यक आर्थिक भार कटौती गरौं । अन्यथा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गरौं ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई तिम्ले गर्दा गणतन्त्र आएको हो र ? सक्छौ भने चुनावमा लडेर आउ प्रतिस्पर्धात्मक राजनितीमा भनेर चुनौती दिए । यहाँनेर धेरै कुरा छन् । राजा पूर्वभए नि राजै थियो पश्चिम भए नि पूर्व राजै हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी रास्ट्रपतिकै निर्वाचन भएपनि पूर्व राजाको औकातले चुनाव लड्न दिंदैन ज्ञानेन्द्रलाई भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी बनेर किन आउँथे र पूर्वराजा । दुःखको कुरो यदि पूर्वराजा चुनावमै लडेर आउने घोषणा गरे को जालान् प्रतिष्पर्धामा , अझै उनको क्षेत्रमा ? गणतन्त्रको एजेण्डा लिएर जनताबिच जान किन चाँहदैनन् के यी राजनितीक दल ? यीनीहरुलाई स्पष्टै थाहा छ । पासा पल्टिन्छ । नसोचेको परिणाम आँउछ । नत्र किन खुट्टा कमाउनु पर्यो त गल्ति नगरेको भए ? जनतलाई सर्वेसर्वा मुखले मात्रै भन्ने, निर्णय भने आँफैले लाद्ने । कस्तो कच्चा राजनिती ? छाती ठोकेर निर्धक्क बोल्न र गर्न कस्ले छेक्दो रहेछ कुन्नी ?
एउटा राजनेता यस्तो होस कि उ विद्धान छ । ब्यक्तित्व पनि दमदार छ । पढेलेखेको छ । मानौं कि उ राजनितकिो सत्गुरुनै हो । उसले भनेका कुरा सबैले नतमस्तक भएर सुनुन्, बुझुन् र मानुन् पनि । हो, यसमा केही खुबी छ भनेर बिश्वास गरुन् पनि । के हाम्रो खप्परमा त्यस्तो राजनेता नलेखेकै हो त ? यो देशले अझै कति बर्ष पर्खनुपर्नेहोला एउटा सक्षम नेतृत्व पाउँनका लागि ? बोल्नेभन्दा काम गरेर देखाउने नेता आकाशबाटै आउँछन् कि धर्तीमै जन्म लिन्छन् ?
अब समाचारतर्फ लागौं । ………
गणतन्त्र राजाले ल्याएको हो, हामीले होइन ….. राजालाई राजनितीको कखरा सिकाइँदैछ ।
कात्तिक २४, काठमाडौं ।। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनाव लडेर शासन गर्न चुनौती दिएका छन् ।
बुधवार गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्नका लागि चुनाव लडेर आउनुपर्ने बताउँदै प्रजातन्त्रको बिरुद्धमा नलाग्न चेतावनी दिए ।
उनले पूर्वराजा शाहलाई प्रजातन्त्रबाहेक सबै कुरा सुम्पिने बताउँदा आफूलाई जेलमा हालेको स्मरण गर्दै शासन व्यवस्थाविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्रले नै ल्याएको हो, हामीले ल्याएकै होइन, मैले सरकार सबै चढाउँछु, प्रजातन्त्रविरुद्ध जान सक्दिनँ सरकार भने तर मलाई जेलमा थुनियो, त्यसकारण एकाएक जनता तातिए, प्रजातन्त्र आइसकेको देशमा प्रजातन्त्रको पक्षमा गइसकेको छ, त्यही पनि शासन चलाउँछ, यसको खिलाफमा मान्छे लाग्न सक्छन्, त्यसकारण अगाडि बढे भइहाल्यो नि ! मैले भनिसकें प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो, अरु हुनै सक्दैन, उनीहरूले चुनावमा आएर लडे भइहाल्यो नि ! चुनाव लड्न नसक्ने अनि प्रजातन्त्रको खिलाफ भनेर हुन्छ, यो अहिले सबैभन्दा राम्रो संविधान छ, समावेशी, समानुपातिक छ, सबैलाई अटाएको छ, केही समस्याहरू आउन सक्छन्, हामीले प्रजातान्त्रिक ढंगबाटै समाधान गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता भएको स्मरण गराए । उनले निर्वाचन आयोग र वडादेखि नै हुने चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रलाई जनताप्रति लक्षित कसरी बनाउने भनेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संविधानका केही कुरामा आफ्नो पनि असहमति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘जनताभन्दा ठूलो अर्को शक्ति नै छैन हेर्नुस्, जनता नै हो यो देशको मालिक, जनताले सहयोग गरेनन् भने जान्छ, त्यसैले यहाँ जनतन्त्र भन्छ, प्रजातन्त्र भन्छ, प्रजा भनेको जनता नै हो, यसमा अर्को पाटो हो निष्पक्ष चुनाव, कसैले पनि धाँधली गर्न नसकोस्, बद्मासी गर्न नसकोस्, त्यसैले निर्वाचन आयोग छ, त्यो अत्यन्तै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कुनै पार्टीसँग मिल्ने होइन, स्वतन्त्र रहने संस्था हो, निर्वाचन आयोगले कसैको कुरा मान्दैन, आफ्नो नीतिअनुसार हिँड्छ, निष्पक्ष निर्वाचन आयोगका साथसाथै वडा–वडाबाट नै निष्पक्ष चुनावबाट जो आउँछ मान्नुपर्छ, उपाय नै छैन, जीते पनि हारे पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सरकारले जनताप्रति काम गरेन भने अर्को आउँछ, जनताप्रति पजातन्त्रलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने त्यतातिर लागौं न हामी, मैले त धेरै पटक भनिसकेको छु ।’